हजारी फूलको मगमग बास्नामा कटही | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / हजारी फूलको मगमग बास्नामा कटही
हजारी फूलको मगमग बास्नामा कटही
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार February 10, 2019	0 134 Views
घोराही । राताम्य हजारीका फूलहरु नभएको घर घोराही–१७ कटहीटोलमा कुनै पनि छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । कालोपत्रे सडकको दुबै किनारमा फुलेका हजारी फूलको मगमग बासनाले टोल क्षेत्र छोपेको छ। आखाले जति देख्छ त्यो भन्दा बढी नाकले नजिक पुगेको पत्तो पाउ“छ ।
घरबाट निस् कदा होस् वा भित्र पस् दा दाया बायाका फूलहरुले बाटो सिकाउछन् । सडकमा निस् िकएपछि पनि स् वागत र विदाइ गर्न बाटोका किनारमा हजारी फूलका थुंगाहरु ठडिएका हुन्छन् । बाटो हिड्नेहरुलाई फूल चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला है भन्नेहरु घरघरै जसो
हुन्छन् । उनीहरुको मुखबाट चाडै निस्कने शब्द बनेको छ सुपथ मूल्यमा दिन्छौं ।
दशैं तिहारको हारालुछपछि फूलको व्यापार सुस्ताएको मानिन्छ । एउटा माला तीन सयसम्ममा भाइटीकाको अघिल्लो दिन घोराही बजारमा बिक्री हुन्छ। त्यसपछि पूजापाठ, विवाह, स्थापना दिवस, साधारणसभालगायतका शुभकार्यमा फूलको आवश्यकता पर्छ । आवश्यकता कम्ति हुदै गएको महसुस गरी एउटा माला तीस रुपैयासम्ममा बिक्री गरेको टोलवासीले बताए ।
त्यसलाई भब्य बनाउन कटहीका हजारीका फूलले भूमिका निर्वाह गरे । प्लाष्टिकका हलुका फूलको ठाउमा ओजिला हजारीले अतिथिको गरिमा बढाइदिए । अरु काममा उपयोग नहुुने खादाका चिर्कटाको स् थान पनि हजारीका फूलले ओगटे । टोल विकास संस् थाका अध्यक्ष हुमा डिसीका अनुसार पाच हजारका माला उपमहानगरपालिकामा आयो । बिहे तथा अन्य शुभ कार्यमा लगिरहेका छन् । अझै पनि एक लाख बराबरका फूल छन् । माग भए जतिबेला पनि दिन सकिन्छ ।
एकैचोटि सडक किनारभरी कसरी फूल फुले ? अभियान कसले चलायो ? जोगाउने भूमिका कसको हो यस्ता अनेकौं प्रश्न उब्जिन्छन् ।
त्यसको जवाफ विगत १८ वर्षदेखि टोलको अध्यक्ष पद सम्हाल्नु भएका डिसीको मुखाकर छ । शुरुका दिनको याद गर्दै डिसीले भन्नुभयो– ‘घरमा मात्रै लगाउ“दा चु“डाल्नेहरुबाट जोगाउनै मुस् िकल भयो, बाटोमा पुग्दा त झनै कतै नभएको फूल खेती भनेर थुप्रैले आलो चना गरे ।’ उहा“ले थप्नुभयो– ‘टोलबाटै निर्णय गरेर सबैले फूल रोप्ने बनाइयो । अहिले सबैका घर अगाडि फुलेका छन् खुशी छन् । रमाइलो छ ।’
उहा“का अनुसार पहिला घर, त्यसपछि टोल र बाहिरको समाज बदल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्छ । फूल फुलाउने सामान्य लाग्थ्यो। मैले के पो गरेको छु र भन्ने महसुस भइरहन्थ्यो । यसपटक घोराही उपमहानगरपालिकाले सर्र्र्वोत्कृष्ट टोल भनेर सम्मान गरेको छ । टोल विकास संस् थाको उद्देश्य र भावनाअनुरुप काम गरेको उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भनेर १० हजार नगदसहित कदरपत्रले सम्मान गरेको छ । यसले टोलवासीमा असीमित खुशी भिœयाएको छ । अध्यक्ष डिसीलाई पनि सन्तुष्टि दिएको छ । लमही–घोराही सडक खण्ड चौघेरा चोकसम्मै यसैगरी फूल फुलाउने धोको रहेको सुनाउनुभयो ।
कालोपत्रे सडकको अर्थ हरियाली लगाउन खोजेको वडासचिव ईश्वरराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरपालिकाको सर्वोत्कृष्ट टोल बनाउन सफल वडाले अरु टोलको बारेमा सोच बनाइरहेको छ । कतिपय टोल प्लाष्टिक जलाउने, जथाभावी फाल्ने फोहोरी रहेको वडाध्यक्ष खुशीराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार कतिपय टोल भने सा“च्चै नमूना बनेका छन् । सरसफाइ र सुन्दरतामा उनीहरु धेरै
अगाडि छन् । यस वर्षदेखि जहा“ कालोपत्रे सडक त्यहा फूल तथा हरियाली कार्यक्रम लागु गर्ने वडाले जनाएको छ । त्यसको शुरुवात वडा कार्यालय, हरिद्वार स् वास् थ्य केन्द्र, सरकारी विद्यालयहरुलगायतका संरचना उदाहरणीय बनाएर अघि बढ्ने योजना छ।
कतैबाट पनि खोट लगाउन नसकिने कटही टोल फेला परेको अनुगमनमा पुग्नुभएका वातावरण तथा विपत व्यवस् थापन समितिका संयोजक एवं घोराही–१४ का अध्यक्ष शक्तिराम डागीले जानकारी दिनुभयो। उहाका अनुसार घोराहीको इज्जतका लागि कटहीले अतुलनीय योगदान दिएको छ। त्यसका सकारात्मक गुणहरु शान्ति टोलमा फूल फुलाएर केही देखिएका छन् । बर्गद्दी हु“दै चौघेरासम्म ल्याउन सके यसले झन् ठूलो महत्व राख्ने छ । त्यसका लागि वडाले विशेष पहल गर्नुपर्छ। अरु टोलहरु अध्ययन अवलोकनका लागि त्यहा“ पुग्न जरुरी छ । लामो खडेरीको बेलामा पनि झकाझुर फूल फुलाउनु असामान्य हो।
Previous: इराक लगिदै गरेका चेलीको उद्धार
Next: पाण्डवेश्वर धामको प्रवद्र्धनमा सरकारको साथ रहन्छ : पर्यटनमन्त्री